DHIIGBAXA KU JIRA BAKAYLAHA: SABABAHA, CALAAMADAHA, DAAWEYNTA GURIGA - XOOLAHA
Waa maxay sababta ay bakaylaha u leeyihiin indho xanuun iyo indho-biyood
Haddii bakeylku uu dib u dhaco indhaha iyo ilmada ayaa ku soo baxaya, ka dibna, waxay u badan tahay, inuu qandho ka geystey xannuun. Cudurkani wuxuu badiyaa ku dhacaa xayawaanka dhogorta leh. Waxay si gaar ah ugu nugul yihiin daryeelka aan habooneyn iyo la'aanta vitamiin, sidaa daraadeed dhammaan tarbiyadu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan cudurkan. Tixgeli sababaha cudurka, hababka daaweynta iyo ka hortagga.
Waa maxay xanuunka qatarta ee bakaylaha
Dhiig karka waxaa loogu yeeraa infakshanka xuubka xabka ee isha. Cudurku wuxuu ku bilaabmaa raaxo la'aanta ay keento jeexjeexin, iyo xayawaanka guud ee xayawaanka. Laakiin haddii aadan qaadin tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waqtiga, cudurku wuxuu keeni karaa cawaaqib khatar ah.
Ma taqaanaa? Bakayle wuxuu leeyahay indho la yaab leh: wuxuu arki karaa waxa isaga ka danbeeya isaga oo aan madaxiisa u rogin.
Kuwaas waxaa ka mid ah:
Nabaro dheecaan leh, kuwaas oo foomka dheecaanku ka soo baxo: dheecaan badan oo malax ah, cunista timaha iyo maqaarka agagaarka indhaha iyo dhabannada, samaynta boogaha xanuunka leh iyo adeering indhaha leh malax;
keratitis, kaas oo isha ee isha iyo dusha sare ee indhaha ay noqdaan barar, taas oo keenta xanuunka waxayna keenaysaa daruuro iyo aragti la'aan, iyo kadibna isha ilka;
encephalitis, taas oo ah, caabuq ka mid ah nidaamka dareenka dhexe, kaas oo khatar ku ah nolosha;
infekshanka dadka intiisa kale ee bakteeriyada ee qaabka faafa ee xannuunka ku dhaca.
Ma daaweyn kartid bakayle adiga oo aan ogaanin sababta uu indhaha u yahay casaan iyo biyo. Hababka daaweynta xanuunka loo yaqaan 'Conjunctivitis' waxay ku xiran tahay sababta uu u dhaco, sidaas darteed waa muhiim inaad marka hore sameyso sababta cudurka, kadibna waxay bilaabi doontaa inay wax ka qabato.
Baro calaamadaha, qaababka daaweynta iyo ka hortagga cudurada bakayle.
Indhaha ayaa ka ilaaliya dabiiciga ah shey shisheeye oo ka baxsan dibadda: waa xuubka, waa filinka ugu khafiifsan ee daboolaya gadaasha indhaha iyo inuu ilmo ka daadiyo si ay u daadiyaan qashin ka baxsan isha.
Isku dhafka indhaha ah ee indhaha, waxay ka kooban tahay nooc bac ah, albaabka oo ka furan xagasha isha. Haddii qashinka qashin-xannibaadku uu joogto yahay, qaylo-dhaanta jeexjeexa ma qabsadaan. Miro yar oo ciid ah oo ku dhex jira maadada caanaha ayaa sababi karta microtraumas. Taas awgeed, bararka xinjirta xinjirta ayaa soo baxa, taas oo ah, xannuun. Waxyaabaha shisheeye ee isha ku haya ee isha ayaa ah boodh (dhismo iyo caadi), qayb ka mid ah cagaarka, quudinta xayawaanka, balka, dhogorta, wasakhda, saxarada, cayayaanka iyo qashinka kale.
Indhaha waxaa kale oo uu noqon karaa mid lagu dhaawacay dhaawaca awgiis: dharbaaxo, xoqan, fiiqan fiiqan, qaniinyo. Khatarta waa xayawaan aan si fiican loo daryeelin. Haddii unug si aan caadi ahayn loo soo saaro oo loo qoro, suurtogalnimada cudurku wuu kordhaa.
Ma taqaanaa? Wixii ah bakayle, waxaa jira aag aan la arki karin ee hore: laga bilaabo caarada sanka iyo hoos. Dhab ahaantii ma arko waxa ka dhacaya sankiisa.
Indhaha qoyan waa mid aad u xasaasi u ah kicinta kiimikada.
Kuwani waxay noqon karaan:
aerosols kala duwan: cadar, cadho iyo badeecooyin, unugyada unugyada;
qiiqa sigaarka iyo dabka;
Mukhaadarin aad u xoogan: kiimikada guryaha (acid, alkali), shaambada xayawaanka lagu xayeysiiyo, qurxinta alaabta lagu qurxiyo;
ammonia ur ka soo kaadida ee kaadida ama saxarada xayawaanka kale;
Qaybaha yaryar ee aerosol ama gaas, helitaanka dusha sare ee xinjirta, xoqin oo keena barar. Qiiq ur adag ayaa yaraynaya difaaca waxayna xitaa kicin karaan falcelin xasaasiyadeed.
Cudurada bakteeriyada iyo fayraska
Sababaha joogtada ah ee cudurku waa microbes-ka loo yaqaan 'pathogenic pathogens'.
fayraska (adenovirus, herpes);
bakteeriya (chlamydia, staphylococcus, streptococcus);
Daawooyinka yaryar ee bukaanku waxay isha ku hayaan boodhka iyo wakhti wakhti ah ayaa jira iyaga oo aan waxyeello u keenin bakayle. Inkastoo xayawaanka ay caafimaad qabaan, nidaamka difaaca ayaa ka hortagaya jeermiska. Sida ugu dhakhsaha badan habka difaaca jirka ayaa daciifisa, bakteeriyada waxyeellada leh ayaa bilaabata inay si firfircoon u dhufato, taasoo keenta caabuqa xinjirta.
Si loo isticmaalo xinjirta caadiga ah, bakayle waa inuu si joogto ah u buuxiyaa jirkiisa fitamiinada A, E iyo C.
Waa muhiim! Carotene ayaa la baabi'iyaa wakhti ka dib, sidaas awgeed cuntada dheeriga ah waa la keydiyaa, fitamiin A ka yar ayaa ka kooban.
Gaar ahaan muhiimka ah waa fitamiin A, meesha laga soo xigtay carotene. Haddii xayawaanku haysto cunto caato ah oo aan lahayn carotene ku filan, tani waxay saameyn xun ku leedahay xuubka xuubka indhaha: waxay noqotaa mid barar ah, qallajin, muuqaalka duufaanka iyo boogaha.
Cuntada hodanka ah ee Carotene:
xagaaga iyo dayrta - dabacasaha leh dhaladooda, cawska, si fiican u go'ay hay, kaabajka, digirta, firileyda oo soo baxa;
xilliga qaboobaha - silo laga sooco maaddooyinka liistada leh;
quudinta xooggan oo leh maaddada lagama maarmaanka ah ee fitamiin A.
Waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato haddii ay suurtagal tahay in la bixiyo maro, rooti, ​​siiriyaal, bran, guntin iyo gooryaan si ay bakaylaha, waxa lagu quudiyo bakaylaha, iyo cawska si ay u quudiyaan bakaylaha.
Caabuqa ka yimaada qeybaha kale ee jirka
Badanaa xinjirowga waxaa lagu gubaa sababtoo ah galitaanka mishiinka waxyeellada leh ee ka yimaada xubnaha kale ee ku dhow soo dhaweynaya indhaha.
Sababta ayaa noqon karta cudurro faafa oo aan la daaweyn:
xoqida afka (stomatitis).
Daaweynta qandhada ee cuduradaas daruuri waxay u egtahay in ay xanuujinayso xuubka maskaxda ee isha.
Sidee loo gartaa xinjirowga: calaamadaha
Bilowga hore ee cudurka, way adag tahay in la arko calaamadaha. Laakiin waa muhiim inaad si taxadar leh u eegto wax kasta oo dib u habeyn ah indhaha iyo isbeddelka ugu yar ee habdhaqanka bakayleeyda iyo dadka waaweyn. Haddii aad dareento xinjirowga hore mar hore, way sahlan tahay in la daaweeyo, waxaad iska ilaalin kartaa dhibaatooyinka iyo caabuqa dadka oo dhan.
Calaamadaha marxaladda hore ee cudurka:
casaanka iyo bararka indhaha, dheecaan ilmo;
xayawaanku wuu lumiyaa cuntadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa, indhahiisa wuxuu ku daboolaa jilitaankiisa, xagiisa ka soo baxa, iftiimiyaa geeska.
Soo ogow cudurrada bakayleyda inay halis gelinayaan caafimaadka aadanaha.
Maqnaanshaha daaweynta, cudurku wuxuu kobciyaa oo isu rogaa qaabab badan oo adag:
Catarrhal (muus) qaabka: xajinta ayaa kordhisa, bararka indhaha iyo dheecaanka oo kordha, casaanku wuxuu ku faafaa maqaarka agagaarka indhaha, ilmada waa muuqan timaha;
nadiif ah: ilkuhu waa isku qasan yihiin dheecaannada daahirsan, dheecaanku wuxuu bararsanayaa dheecaan badan, xuubku wuxuu ku uruuraa geesaha indhaha iyo jilicisyada cilia, daboolka boogaha ee indhaha;
qaabka fayloserka ah, taas oo lagu gartaa barar xoog leh oo ah xuubka xabka, kaas oo kufadhiya qaab gacan-qabsi ah;
qaabka sare, marka qulubku koraan dusha sare ee qarniga qarnigii saddexaad.
Ayadoo ay jirto dhibaatooyin kale, keratokonjunctivitis ayaa ka soo baxa, taas oo ku dareysa caabuqa cududda.
Daaweynta xummad-celinta guriga
Marka ugu dhaqsaha badan ee calaamadaha liiska lagu arkay ee bakaylaha, waa lagama maarmaan in si dhakhso ah wax uga qabato. Xayawaanka bukaanka waa in laga soocaa kuwa kale, unuguna waa in lagu nadiifiyo xal chlorhexidine.
Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad dhaqdo indhaha cudurka: xal casaanka ah ee daloolka dhalaanka, 2% xal boric acid ah ama furatsilinom (waa kala-xoqin 1 kiniin ah 100 ml oo biyo kulul iyo qabow).
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo doorto bakayle marka la soo gadanayo, da'da caruurnimadu daatay iyo sida loo daryeeli karo, iyo sidoo kale waxa saameynaya nolosha iyo muddada uu bakaylaha ku noolaan karo celcelis ahaan.
Maydhista ayaa gacan ka geysan doonta in la nadiifiyo indhaha qarsoodiga iyo jirooyinka. Ka dib markaa, bakayle ayaa saameeya waa in lagu muujiyo xoolaha, kaas oo samayn doona cilad sax ah. Hababka daaweynta waxay ku xiran tahay qaabka loo yaqaan 'conjunctivitis'.
Foomka degdega ah wuu sahlan yahay oo dhakhso ayuu u daweeynayaa. Waxay ka kooban tahay saddex marxaladood: dhar, kicinta iyo isticmaalka boomaatada. Sumeeyayaasha wax lagu dhaqo ee Antiseptic:
xalka potassium (2 xabbadood oo hal galaas oo biyo ah);
boric acid (2% xal);
decoction ee chamomile ama kalendula;
Albucid (3% xal).
zinc sulfate (qiyaasta boqolkiiba 0.5%) iyo dhibicyada kale ee jinc;
Albucid (xal 20-30%);
indhaha oo dhibcood u ah eeyaha iyo bisadaha (Tsiprovet, Iris).
Daaweynta Daaweynta: La dhaqida antiseptics - 3 ama 4 jeer maalintii, ka dib markaad dhaqayso - adoo hindhisid 2-3 dhibcood ishaada, kadibna isticmaal boomaato. Indhaha hoostiisa, boomaato yaryar ayaa lagu dhejiyaa suufka, ka dibna dhinaca indhaha ee indhaha ayaa lagu duugaa farta si loo qeybiyo daawada dhammaan isha. Koorsada daaweynta waa 7 maalmood.
Dhiig karka sirta ah
Daaweynta qaabka muraayada ah waxay raacaysaa qaab isku mid ah (maydhista, marin-biyoodka, adoo isticmaalaya cad cad). Si aad u dhaqdo iyadoo la isticmaalayo hab isku mid ah sida foomka catarrhal.
Farqiga ayaa ah in dawooyinka lidka bakteeriga iyo antiviral loo isticmaalo. Intaa waxaa dheer, haddii isha lagu xiro qolof midab leh, waa in lagu qooyay kareem ka xal of boric acid. Markaa kadib ayaa la bilaabi karaa dhaqitaanka.
Dhibaatooyinka ay ku taliyaan dhakhaatiirta:
antibacterial: Gentamicin, Levomitsetin, Tsiprolet, Albucid;
antiviral: Aktipol, Trifluridin.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato 10-ka mid ee ugu muhiimsan ee ku saabsan bakaylaha.
antibiotics: Tetracycline, Ofloxacin, Olethetrin;
antiviral: oxolinic, Florenal.
Taas macnaheedu waa in la doorto daweyn, bakteeriyada ama fayraska, waxay go'aamineysaa dhakhtarka xoolaha ka dib marka uu go'aamiyo sababta cudurkan. Haddii ay dhacdo dhibaatooyin, dhakhtarku wuxuu soo jeedinayaa irbado dheeraad ah oo antibiotic ah. Maqaarka gubta iyo maqaarka ee indhaha u dhow indhaha waa in la maydiyaa oo lagu daboolaa bambooyinka ama boogaha iodoform. Sida qaabka ugu xun, hababka caafimaadka ayaa la qaadaa 3-4 jeer maalintii maalintii 5-7 maalmood.
Waa muhiim! Haddii aan la daweynin, markaa waxay u geli doontaa qaab dabacsan, taas oo aad u adag in la daaweeyo.
Si aad u ilaaliso xayawaankaaga cudur aan fiicneyn iyo xanuun leh, waxaad u baahan tahay inaad u hoggaansanto caadooyinka aasaasiga ah ee caafimaadka xoolaha iyo nadaafadda iyo nafaqada habboon.
ilaalinta unugyada nadiifka ah;
nadiifinta saxaarada maalinlaha ah;
nadiifinta joogtada ah ee unugyada iyo kaydinta;
maqnaanshaha walxaha fiiqan ee qafiska;
Iska ilaali in aad ku buufisid cadar iyo kiimikooyinka guryaha u dhow ee bakaylaha;
nafaqo isku dheelitiran oo hodan ku ah fitamiin A;
tallaal joogta ah.
Dhiig karka, oo ka duwan cudurada bakayle, ayaa si xor ah loo daweyn karo. Waxaa muhiim u ah dadka duuban ee bakteeriyada inay ka warqabaan cudurkan caadiga ah, u hoggaansamaan xeerarka kahortagga iyo isha ku hayaan xayawaanka raba in ay ogaadaan calaamadaha ugu horeeya ee caabuqa waqtigooda. Kaliya sidan ayaa bakeyle u noqonayaa mid si guul leh u taraya.
Dhibaatooyinka ba'an, bakaylaha waxaa lagu maydiyaa kookeenta cufan leh biyo macaan, 2% xalal boric acid, diirran (3% eeyaha), 0.5% xal of zinc sulfate, 2-3 dhibcood 3-4 jeer maalintii. 10-20-30% xalalka sodium albucide ayaa sidoo kale lagu aasay indhaha. Haddii tani aysan ku caawin, adeegso 0,25% of levomiticin, xal 1% ah kanamycin, 2-3 dhibcood 4-5 jeer maalintii. Iyada oo hoosta indhaha ayaa jiifay 3-4 jeer maalintii oletetrinovy, bacriminta hydrocortisone. Cudurka dabaysha ee joogtada ah, xalka 0.5% ee zinc sulfate, xalka 0.5-1% ee nukliyeerka madow ayaa la gashadaa xuubka xaddiga 3-4 jeer maalintii, iyo 1% mercury huruud ah 1-2 jeer maalintiiba waxaa loo maamulaa indhaha cadar.